ကလေးများအတွက် Cambridge English Exams ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည် - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on March 22, 2017 at 12:56 in British Council Library Services
<Zawgyi> နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်များအတွင်း သင်၏ သား၊သမီးများအတွက် Cambridge မှချီးမြင့်သော အင်္ဂလိပ်စာ အောင်လက်မှတ်ရရှိရန် ပြင်ဆင်နေပါသလား?
ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်တွင် Cambridge English Exams ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၇ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) တွင် ညနေ ၄:၃၀ နာရီ တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန် - ညနေ ၄:၃၀ နာရီ
နေ့ရက် - ၂၀၁၇ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့)
နေရာ - ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက် (၇၈ ကမ်းနားလမ်း ရန်ကုန်မြို့)
ဤဟောပြောပွဲသည် ကလေးငယ်များအတွက် Cambridge စာမေးပွဲများဖြစ်သော Starter, Movers, Flyers နှင့် ၎င်းစာမေးပွဲများနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိစေရန် ရှင်းလင်းတင်ပြမည်ဖြစ်ရာ ဗြိတိသျှကောင်စီမှ Teacher of English ဖြစ်သော ဒေါ်တာရာမှ အကြံပေး ဟောပြောမည်ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပြီး တက်ရောက်လိုပါက စာကြည့်တိုက်တွင် လာရောက်စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက် ဖုန်း ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄ လိုင်းခွဲအမှတ် ၃၃၁၆ နှင့် အီးမေးလ် library.enquiries@mm.britishcouncil.org သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
နှရောသီ ကြောငျးပိတျရကျမြားအတှငျး သငျ၏ သား၊သမီးမြားအတှကျ Cambridge မှခြီးမွငျ့သော အင်ျဂလိပျစာ အောငျလကျမှတျရရှိရနျ ပွငျဆငျနပေါသလား?
ဗွိတိသြှကောငျစီ စာကွညျ့တိုကျတှငျ Cambridge English Exams ဆိုငျရာ ဟောပွောပှဲကို ၂၀၁၇ မတျလ ၂၄ ရကျနေ့ (သောကွာနေ့) တှငျ ညနေ ၄:၃၀ နာရီ တှငျ ကငျြးပမညျဖွဈပါသညျ။
အခြိနျ - ညနေ ၄:၃၀ နာရီ
နရေ့ကျ - ၂၀၁၇ မတျလ ၂၄ ရကျနေ့ (သောကွာနေ့)
နရော - ဗွိတိသြှကောငျစီ စာကွညျ့တိုကျ (၇၈ ကမျးနားလမျး ရနျကုနျမွို့)
ဤဟောပွောပှဲသညျ ကလေးငယျမြားအတှကျ Cambridge စာမေးပှဲမြားဖွဈသော Starter, Movers, Flyers နှငျ့ ၎င်းငျးစာမေးပှဲမြားနှငျ့ ပတျသကျသော အကွောငျးအရာမြားကို ပိုမိုသိရှိစရေနျ ရှငျးလငျးတငျပွမညျဖွဈရာ ဗွိတိသြှကောငျစီမှ Teacher of English ဖွဈသော ဒျေါတာရာမှ အကွံပေး ဟောပွောမညျဖွဈပါသညျ။
စိတျပါဝငျစားသူ မညျသူမဆို တကျရောကျနိုငျပွီး တကျရောကျလိုပါက စာကွညျ့တိုကျတှငျ လာရောကျစာရငျးပေးနိုငျပါသညျ။
အသေးစိတျသိလိုပါက ဗွိတိသြှကောငျစီ စာကွညျ့တိုကျ ဖုနျး ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄ လိုငျးခှဲအမှတျ ၃၃၁၆ နှငျ့ အီးမေးလျ library.enquiries@mm.britishcouncil.org သို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ။